Driver | Nice Style Travel & Tours Co., Ltd. ﻿
7.2.2019, Full time , Tourism / Travel
It is our pleasure introducing you to Nice Style Travels & Tours Co., Ltd, which is currently working with Corporates, NGOs and travel providers around the world. Our company was officially licensed under the Ministry of Hotel & Tourism, Myanmar with licensed number KHA – 1477, Myanmar Tourism Marketing and International Air Transport Association (IATA) respectively. If you are looking for International and Domestic Air Tickets, Outbound tour packages, Inbound Tour Packages, World Wide Visa Services and all travel services that will meet your needs and satisfaction, we believe our company asareliable partner to support you and would provideagood experience with highly responsible manner. Our well – qualified and highly – experienced professional service with special focus on customer satisfaction offers unique pleasure in traveling. We take pride in providing first-rate services to each valued guest and believe that your beautiful traveling dreams can shape together. We will be delighted to hear from you and will be happy to support all your travel needs asagood travel partner without any obligation on your part.
•	ကားအကြောင်း နားလည်ပြီး အစုအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဘွဲ့ရ (သို့) အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ဘယ်မောင်း (သို့) ညာမောင်းနှစ်မျိုးလုံး မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
•	လိုင်စင်သက်တမ်းအနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
Work location No.355, Room (105), Theinphyu Road, Mingalartaungnyunt Township, Yangon.
Nice Style Travel & Tours Co., Ltd.
111 Days, Full time , Tourism / Travel
•	လုပ်ငန်းအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စား၍သင်ယူလေ့လာစိတ်၊နာခံလိုစိတ်ရှိပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ( Domestic)
•	လုပ်ငန်းအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စား၍သင်ယူလေ့လာစိတ်၊နာခံလိုစိတ်ရှိပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ( International)
•	ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီးအစုအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ •	တက်ကြွလန်းဆန်း၍ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အစုအဖွဲ့ နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည့်အပြင် ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
133 Days, Full time , Tourism / Travel
•	ကားအကြောင်း နားလည်ပြီး အစုအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Nice Style Travel & Tours Co., Ltd. Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver Jobs in Myanmar, jobs in Yangon